Depiote Hawel Mamod'Ali : Tsy voasazy, ary tsy voaheloka -
AccueilSongandinaDepiote Hawel Mamod’Ali : Tsy voasazy, ary tsy voaheloka
01/10/2018 admintriatra Songandina 0
Taorian’ny zava-nitranga tany Morondava, izay nahafatesana olona sy nahatonga korontana eraka ny tanàna. Afa-maina ny solombavambahoaka Hawel Mamod’Ali, rehefa avy nampanantsoin’ ny OMC tany an-toerana. Fantatra fa tsy nisy ny sazy, saingy noho izy niantso ny vahoaka hitroatra dia niangavian’ny OMC ihany koa ity farany handamina ny vahoaka nanaraka azy, hilamina amin’ ny alalan’ny haino aman-jeriny. Manoloana izao zava-mitranga izao, dia mandeha ny resaka fa misy ambadika izao fahafahan’ingahy depiote maina izao. Mipetraka noho izany ny fanontaniana hoe, iza ary no nanao tsindry mba ahafahan’ity solombavambahoaka ity mora foana. Marihina anefa fa vesatra roa no azo niampangana ny solombavambahoaka, ary tra-tehaka ambodiomby ity farany.
Vavolombelon’ny mponina tao Morondava, noho izy nanentana ny mponina hiady amin’ ny fanjakana. Izany hoe rehefa inona vao mihatra ity fahatrarana ambodiomby ity, rehefa tena ara-bakiteny tokoa ve. Hampanjakain’ny lehiben’ny govenemanta, lehiben’ny sampandraharaham-panjakana ve izany ny tsimatimanota. Izy izay nilaza fa hampanjaka ny tany tan-dalàna, sa kosa misy ny fanavahana. Midika izany fa misy ny ambonin’ny lalàna amin’ izao fotoana izao, ka na dia mitarika vahoaka hikomy sy handoro ny biraon’ny zandary aza dia afa-maina amin’ izao. Tsy ho gaga ny rehetra raha hitohy io fikomina sy fandorana biraom-panjakana ity, noho ny fitaratra ratsy asehon’ ny mpitondra ankehitriny. Izany hoe samy mandeha samy mitady izany izao, ary samy manao izay tiany ihany koa. Raha olona ambony manao ny tsy mety dia afa-maina, raha olon-tsotra kosa dia ohatri azay efa any am-ponja
Tato ho ato dia re tokoa ny fisian’ny tsy fandriam-pahalemana etsy sy eroa ary manerana an’i Madagasikara mihitsy aza, adidin’ny fanjakana tokoa anefa no miady amin’ io fanohitry ny firenena io , ka miroso hatrany ...Tohiny